Go'aan guud oo laga gaarey is bedel lagu sameeyo da'da howlgabka lagu galo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Laba ruux oo howl-gab ah oo meel fadhid. Kaydka sawirrada. sawir: TT
Go'aan guud oo laga gaarey is bedel lagu sameeyo da'da howlgabka lagu galo
La cusbooneeyay torsdag 14 december 2017 kl 10.53
La daabacay torsdag 14 december 2017 kl 08.40
Go’aan ey wada jir u gaareen lix ka mid ah xisbiyada xubnaha ku leh baarlamanka ee mucaaradka iyo muxaafidka ayaa kor loogu qaadey saqafka da’da lagu galo howl-gabka, midka hoose iyo midka sare.
Waxaa la soo jeediyay in kor loo qaado saqafka labada da’ood ee howl-gabka lagu galo, midka hoose oo la gaarsiiyey 64 jir, halkii uu horey uga ahaa 61 iyo midka labaad ee qofku haddii uu doono inuu sii shaqeeysto howl-gabka dabadeed la gaarsiiyey 69, halka ay horay uga ahayd 67 sannadood.
Waxaa sidoo kale la go’aamiyay in kor loo qaado gunnada howl-gabka ee aasaasiga ah ee uu qofku xaq u leeyahay (grundpensionen) iyada oo aan loo aaba yeeleeyn inta sannadood ee uu soo shaqeeyey. Kor u qaadidda gunnada aasaasiga ee howl-gabka ayaa qaadan doonta muddo sannado ah, sida ay sheegtay laanta wararka ee Ekot.
–Waxay qaadan doontaa muddo sanooyin ah, laga yaabee illaa iyo 10 sannadood inta is-bedelladu ey ka hir-geli doonaan, sida uu sheegay Erik Ridderstolpe oo laanta wararka Ekot uga soo warramma arrimmaha siyaasadda.
Heshiiska ayaa sidoo kale lagu gaarey in la dhimo sanduuqyada ku howl-gala miisaaniyadda howl-gabka, iyada oo laga dhimi doono 850 lana gaarsiin doono qiyaastii 200. Midda ugu muhiim-sani waxay tahay sidii loo xaqiijin lahaa tayada sanduuqyada ee miisaaniyadda howl-gabka, sida ku cad heshiiska kooxda howl-gabka oo la soo ban-dhigay 09:00 subax-nimo ee khamiista maanta.
Kooxda howl-gabka ayaa ka kooban xubno isugu jira muxaafid iyo mucaarad oo go’aan ka gaarey dhammaan noocyada nidaamka howl-gabka oo ka kooban saddex qeybood ee howl-gabka, kuwaasina oo kala ah howl-gabka dakhliga, abaal-marinta iyo aasaaska - inkomstpension, premiepension och garantipension.
Kooxdan ayey xubno ka yihiin garabka muxaafadka ee xisbiyada S iyo MP iyo garabka mucaaradka ee Alliansen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna iyo Kristdemokraterna. Wasiirka arrimmaha bulshada Annika Strandhäll (S) ayaa dawladda u matasha guddoomiyaha kooxda.
Si haddaba wax looga bedelo nidaamka howl-gabka iyada oo aan heshiikii hore wax laga bedelin ayay khasab tahay iney dhammaan xisbiyadu ku mideey-san yihiin is-bedellada.
Xuquuda kor u qaadidda ee in lagu sii jiro liiska shaqaalaha oo la gaarsiiyey 69, halka ay horay uga ahayd 67 ayaa ahaa go’aan ku adkaa iney aqbalaan mulkiileyaasha goobaha shaqada ee gaarka loo leeyahey, kuwaasina oo ku andacoonayey iney saameeyn ku yeelan karaan iney xushaan cidda ku habboon iney illaa muddadaasi shaqeeyaan.
–Waa iney aasaas u noqotaa in heshiis lagu yahay in la sii shaqeeyn karo. Waxey noola muuqataa wax aan shaqeeynayn inuu garab keliya go’aan ku gaaro inuu shaqada sii wato, sida uu sheegay ku simaha agaasimaha guud ee shirkadaha munaafacaadka Sweden Peter Jeppsson.
Hoggaamiyeyaasha shirkadaha mulkida loo leeyahey ayaa ka soo hor-jeeda inuu qofka shaqaalaha ahi go’aan ka gaaro inuu sii shaqeeyn karo illaa iyo da’da67 ee iminka iyo 69 kolka is-bedelku uu hir-galo.
Maamullada shaqooyinka dawladda – ururka degmooyinka iyo gobollada ee SKL ayaa soo dhoweeyey in dad intii hore ka badan ey muddo ka badan ey howlahooda sii wadan karaan.
–Waxay middaasi horseedaysaa gunno howl-gab oo ka wanaag-san, si ka sahlan in loo heli karo shaqaale xirfad u leh iyo canshuur ka badan oo soo gasha khasnadda dawladda, sida uu sheegay Niclas Lindahl, ahna madaxa wada-xaajoodka ee SKL.
–Guud ahaan waannu ku qanac-sannahey in kor loo qaado da’da howl-gabka iyo iney dadka ka badan intii hore ey muddo ka dheer sii shaqeeyn karaan, sida uu sheegay Niclas Lindahl.
Lix ka mid ah xisbiyada xubnaha ku leh baarlamanka Sweden ayaa go’aanka wada gaarey, kolka laga reebo xibiyada Vänsterpartiet iyo Sverigedemokraterna.
LO: Dadka xanuunsan ayay dani ugu jirtaa dib u habeenta nidaamka howlgabka